Griezmann oo sheegay inuu si dhab ah u garanayo halka uu ka ciyaari doono xili ciyaareedka cusub – Gool FM
Griezmann oo sheegay inuu si dhab ah u garanayo halka uu ka ciyaari doono xili ciyaareedka cusub
(Yurub) 08 Juunyo 2019. Xiddiga reer France ee Antoine Griezmann ayaa shaaca ka qaaday inuu go’aamiyay mustaqbalkiisa, isla markaana uu si wanaagsan u garanayo kooxda uu u ciyaari doono xili ciyaareedka cusub.
Tan iyo markii uu xiddiga reer France ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda Atletico Madrid seddex isbuuc ka hor, waxaa si aad ah loola xiriiriyay kooxaha Barcelona, ​​Manchester United, Paris St Germain iyo Bayern Munich.
Laakiin sida aan kor ku soo xusnay Antoine Griezmann ayaa waxay u muuqataa inuu si wanaagsan u garanayo talaabada xigta uu qaadi doono, kaliya uu sugayo in si rasmi ah loogu dhawaaqo.
Antoine Griezmann ayaa wareysi uu ku bixiyay TV-ga “Télématin” ee dalka France wuxuu kaga hadlay dhowr arimood ee quseeya mustaqbalkiisa wuxuuna yiri:
“Waan ogahay halka aan ku ciyaari doono xilli ciyaareedka soo socda”.
Laakiin xiddiga reer France ayaa iska diiday inuu wax faahfaahin ah ka sii bixiyo halka uu ku sii jeedo wuxuuna yiri:
“Ma sheegi karo waxaan ka ahayn inaanan u dhaqaaqi doonin Miami”.
Waa wax iska cad in Griezmann uusan si rasmi ah qalinka ugu duugi doonin wax heshiis ah ilaa iyo 1-da July xiligaasoo qandaraaskiisa lagu burburin doono 200 milyan euro ilaa iyo 120 milyan euro.
Macalinka xulka Netherlands oo ka hadlay Cristiano Ronaldo kahor kulanka habeen dambe ee finalka UEFA Nations League
Kaddib markii uu ku biiray kooxda Real Madrid, Eden Hazard oo ka mid noqday 10-ka laacib ee ugu qaalisan Taariikhda kubadda cagta